Kufanele ngiqale ukuxhumanisa isakhiwo namarekhodi ukuhambisa iwebhusayithi ye-backlink ngaphambi kwanoma yini enye?
Namuhla, izici eziyinhloko ze-off-page Search Engine Optimization ziye zaba yinkimbinkimbi kakhulu kunanoma iyiphi enye indlela ye-SEO ekhasini. Eqinisweni, ukwakha izixhumanisi zekhwalithi (kufaka phakathi nezenzo ezidingekayo ukuhambisa iwebhusayithi nge-backlink) zihlobene ngokuqondile ne-SEO-off page, ukuba yingxenye ebalulekile ye-puzzle ephelele mayelana nezinga lokusesha injini ngesilinganiso. Kusho ukuthi yonke iwebhusayithi noma ibhulogi kufanele ibe nephrofayili e-backlink eqinile ekwenzeni ukukhula jikelele ngokukwakha igunya eliphezulu, kanye nomgomo wokugcina ukulawula ama-SERP e-Google - custom car appraisal. Yiqiniso, isabelo sezingonyama amasu wokwakha izixhumanisi ngokuvamile sidinga isikhathi esiningi, futhi ngezinye izikhathi singase sidinge imali encane yokutshalwa kwezimali. Noma kunjalo, ukuba nephrofayli enamandla yokuxhumanisa kuwukufanelekela ukwenza noma kunjalo, okuyohlale kukhokha, ikakhulukazi ngokubheka isikhathi eside.
I-Wins Quick for Building Link Yakho
Njengoba sengishilo kakade, ukwakha iphrofayili yokuxhumanisa kwekhwalithi kumele kube phakathi kwezinto ezibaluleke kakhulu. Yiqiniso, uma unqume ukuhambisa iwebhusayithi ye-backlink noma ngisho kakade unayo yonke into ngaphandle kwalapho-kuhle kuwe! Kodwa lokho bekungeke kwanele ukujabulela i-kickstart enhle kuphrofayela yakho ye-backlink yakho. Uke wazama kokubili izinkampani eziqondene nemboni kanye nezendawo ukuze uthumele iwebhusayithi ye-backlink? Futhi uma usaqinela ukuthi yiziphi izindlela zokuzama kuqala - lapha zikhona. Ngezansi ngizobhala uhlu lwezakhi zokuxhumana eziphezulu ezingakunikela ngokushesha imiphumela ethile elinganiselwe ku-SEO.
AmaBhizinisi e-Local Local
Asikho isidingo sokuthi ukusebenzisa izinkomba zendawo ukuhambisa iwebhusayithi ye-backlink cishe indlela engcono kakhulu yokuqala ukwakha ama-backlinks. Uma usebenza nalezi zisekelo ezisuka esikhathini sokuqala sokuqala kokuqala kwewebhusayithi yakho noma ibhulogi - usuvele ushukuthela endleleni efanele. Unganqikazi ukukhokha isikhathi kanye nomzamo ukuqinisekisa ukuthi ubhalwe kuzo zonke izinkampani ezinkulu zendawo. Faka yonke imininingwane edingekayo, njengendawo yakho yebhizinisi, amahora okusebenza, ulwazi lokuxhumana, njll. Ngaleyo ndlela, ngeke nje uthole i-backlink eyigugu kodwa uthuthukise ukubonakala kwakho kwe-inthanethi kubasesho bendawo, kanye nokusebenza kwebhizinisi lakho jikelele esikalini.
Masibhekane nakho - lolu hlobo lwezinkampani zebhizinisi lungabonakala luhluleka, ikakhulukazi uma kuqhathaniswa nokufakwa ohlwini kwebhizinisi. Noma kunjalo, izinkampani ezithile ezimele imboni akufanele neze zilahlekelwe, njengoba zisalokhu zindlela enhle yokuqinisa ikhono lakho lokwakha isixhumanisi uma iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ihamba bukhoma. Qaphela, noma kunjalo, ukuthi ukuhambisa kulezi zincwadi kuzothatha isikhathi esincane, kepha ungesabi. Ngokuvamile, ukuhlunga okunjalo kuzokudinga ukuthi uqedele inqubo yokubhalisa ngaphambi kokugcina uthumele iwebhusayithi ye-backlink - kodwa izinzuzo zakho ezibonakalayo zifanele yonke imizamo esetshenziswa lapha, ngokuqinisekile.
Ukufuna amathuba okuzwakalisa isixhumanisi ngamarekhodi ewebhu, khumbula ukuthi kufanele ube nolwazi oluhle lwebhizinisi lakho oludidiyelwe kahle futhi oluhambelana ngokugcwele nanoma iyiphi imininingwane yebhizinisi ebhalwe kwenye indawo Iwebhu. Uma kungenjalo, ungabhekana nezinkinga ezithile ezivela eceleni kwezinjini ezinkulu, kanye nenqubo efanele yokukhomba. Ekugcineni, umsebenzi uqaphele futhi uqiniseke ukuthi uhlolwe kabili ukuthi endaweni efanele futhi ephelele ngaphambi kokuqedela yonke inqubo yokuthumela ukuze uthole lezo zinkinga ezibuyiselwe emuva.